ရွာသူရွာသားများအတွက် နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် ချင်းရိုးရာ အစားအစာ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွာသူရွာသားများအတွက် နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် ချင်းရိုးရာ အစားအစာ…..
ရွာသူရွာသားများအတွက် နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် ချင်းရိုးရာ အစားအစာ…..
Posted by yaungchikha on Dec 29, 2011 in Copy/Paste | 23 comments
ကလေးမြို့၊ တာဟန်းမှာ ချင်းလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်၊ ခရစ်စမတ်ပွဲ၊ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲနဲ့ ဆုတောင်းပွဲ၊ တွေမှာ ရိုးရာအစားအစာအဖြစ် ၀က်သားပြုတ်၊ ကြက်သားပြုတ်၊ ဆန်နဲ့အရွက်နဲ့ ရောချက်ထားတဲ့ ဟင်းရည် များနဲ့ဧည့်ခံလေ့ရှိကြပါတယ်၊ ကျမနေတဲ့ အိမ်က ဆုတောင်းပွဲလုပ်ရင်း ဧည့်ခံတဲ့ ပုံလေးတွေကို ရွာသူရွာသားများအတွက် နှစ်သစ်လက်ဆောင်အဖြစ်တင်ပေး လိုက်ပါတယ်နော်၊ ကျမလည်း ရောက်စကတော့ ရိုးရာ အစားအစာတွေနဲ့ မရင်းနှီးပေမယ့် အခုတော့ နေသားကျနေပါပြီ၊ ရွာသူရွားသားများလည်း ၀င်ရောက်စားသွားကြပါဦးနော်………………
နှစ်သစ်ကူး ချင်းရိုးရာချက်ထမင်းဝိုင်းလေးမှာ ရွာသူရွာသားများ အားလုံး ကြွရောက်သုံးဆောင်ကြပါရှင်
၀က်သားပြုတ်၊ ကြက်သားပြုတ် ( ချင်းချက်လို့ခေါ်ပါသည် ) ကိုဆားနဲ့တို့စားလိုက် ဟင်းရည်လေးသောက်လိုက် ချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အစားအစာပေါ့နော်၊ ရွာသူားများလည်း ကြိုက်နှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်….
၀က်သားပြုတ် (ချင်းချက်) ခေါ်တာပေါ့နော် …………..
ကြက်သားပြုတ် (ချင်းချက်) ခေါ်တာပေါ့နော်………..
ကြက်သား (သို့) ၀က်သားပြုတ်ရည်ထဲကို ဆန်နှင့် အရွက်ထည့်ပြီး ချက်ပါတယ်၊ ဟင်းရည်သောက်ပေါ့………
ရွှေဖရုံသီး အနုလေးတွေကိုပြုတ်ထားတာပါ၊ ခရမ်းခါးသီးလေးတွေပါ၊ အတို့အမြုတ်ပေါ့၊ အချိုနဲ့အခါးကို တွဲထားတာပါ………..
ရွာသူရွာသားတွေလည်း ၀င်စားသွားကြပါဦးနော်……… ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့……….
ရွာသူရွာသားအားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှု့အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေရှင်…………………
သူတို့ အစားအစာ တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မဲ့ပုံဘဲ။ အရသာလဲရှိမှာပါ။
ကြက်ရိုးတွေက ကိုက်လို့ကောင်းမဲ့ပုံဘဲ။ ;-)
ဓာတ်ပုံ တွေ နဲ့ ဗဟုသုတ အတွက် ကျေးဇူးဘဲ ညီမရေ။
အောက်ဆုံးပုံက စတုဒီသာကျွေးတာထင်တယ်။ အားရပါးရ ဆွဲနေကြတာ စားချင်စရာ။ နောက်ကြုံရင် ချက်နည်းလေးပါ တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် ရောင်ခြည်ခ လေး ရေ။
အားပါးပါး ဗိုက်ဆာနေတာနဲ.အတော်ပဲ.. ၀က်သားပြုတ်ပိုကြိုက်တယ်… လက်နဲ. အားရပါးရတီးလိုက်လို.ကတော့… ဟေဟေ့
ကျွန်တော်တို. ဗမာ လူမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ ၀က်သားဗူးသီး သဗြွန်း နဲ. သရက်ချဉ်သုပ် ပေါ့…. ရှလွတ်
Shwe Tike Soe က သရက်ချဉ်ဆိုလို့ သတိ၇သွားပြီ။ သရက်ချဉ်သုတ် စားမယ် ကြံစည်ပြီး သရက်သီးအစိမ်းဝယ်ပြီး ကိုယ်တိုင်အချဉ်တည်မယ်ပေါ့။ သရက်သီးတွေ ၀ယ်လိုက်တာ တလုံးပြီးတလုံး တခါမှ ချဉ်တာမပါလို့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ ဒီ ဂျုးတွေ သရက်သီး အစိမ်းတောင် မချဉ်အောင်လုပ်ထားတယ်။ တို့စရာပါတာ ဘာနဲ့တို့စားလဲမသိ ဆားနဲ့များ တို့စားသလား မသိဘူးနော်။ ချင်းပြည်ဆိုတော့ ငါးပိ၊ ငါးခြောက် ရှားမယ်ထင်တယ်နော်။
ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ တစ်ခါတည်း ဝင်စားသွားပါတယ်
ကြက်ရိုးလေးက တော်တော်ကိုက်လို့ကောင်းတာပဲ ….
သများက ဘာမှစားရတေးလို့ချိတ်တိုနေဒါ
သများကို ၀ါးတီးပုံတွေ လာပြတော့
သများ ခံတွင်းတွေ ယားကျိကျိဖြစ်လာဘီ
ဆန်ထည့်ထားတဲ့ အသားပြုတ်ရည် လုပ်စားကြည့်အုံးမှပါ။ ချင်းတွေ ငါးပိထောင်း ငပိရည် ငရုတ်သီးငါးပိကြော် မစားဘူးထင်တယ်။ ဟင်းပွဲထဲမှာ မတွေ့လို့။
သွားရည်ကျသွားပါတယ်…။ စားလို့ တော်တော်ကောင်းမဲ့ပုံပဲ….။ ကိုယ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဒေသတစ်ခုကို ပို့ဆောင်ပေးလို့ ကျေူဇူးနော်………။
နောက်တစ်ခါ…ဒီကြောင် ချင်းတောင်ကို ခြေဆန့်မတဲ့
တို့စရာလေးလည်း တို့စားချင်တယ်။ ဗိုက်တောင် အတော်ဆာလာပြီ။ ၀က်သားတော့မစားလို့မစားတော့ဘူး။ ကျန်တဲ့ဟင်းတွေပဲ လွေးတော့မယ်….
စားချင်လိုက်တာ.. အဲဒီ အသားပြုတ် ကို ငရုတ်ဆီ နဲ့ တို့စားကောင်းမလား မသိဘူး။
ချင်းရိုးရာအစားအစားတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့တော့ ညီညွှတ်မှာပါ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆီမစားကြတာများတယ်၊ အသားဆိုလည်း အပြုတ်စားကြသလို၊ ဟင်းရည်ဆိုလည်း သဘာဝအတိုင်း ရေနွေးဆူဆူထဲ အရွက်ခပ်ပြီးသဘာဝအတိုင်း စားကြတာများပါတယ်၊ အများစုက ဟင်းခပ်မှုန့်မသုံးကြဘူးလေ…………
ငါးပိ၊ ငါးခြောက်ကတော့ ရှားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ချင်းလူမျိုးတွေက ငါးပိ၊ ငါးခြောက် မကြိုက်ကြတာများတယ်၊ စားတာသိပ်မတွေ့မိဘူး……..
ဒါပေမယ့် အသားပြုတ်ဆို ဆားနဲ့တို့စားကြပါတယ်………
ချင်းတိုင်းရင်းသားရယ်လို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသား အတော်များများ အချိုမှုန့် ၊ ဆီ အစားနည်းကြတယ်.. ကိုယ်တွေ မြေပြန့် မှာနေသူတွေသာ ဟင်းဆို ဆီကို ဝေ့နေမှ စားကောင်းတယ်ထင်ကြတာ.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်က ချင်းရဲဘော်လေးတစ်ယောက် သူတို့ တောင်ပေါ်အစားအစာချက်ကျွေးမယ်ဆိုလို့စားမယ်လည်းကြည့်လိုက်ရော ရွှေဖရုံသီးကို မြေအိုးနဲ့ ပြုတ်ထားတာဖြစ်နေတယ်.. သူတို့ တောင်ပေါ်ဒေသမှာဆိုရင် ရာသီဥတုဆိုးရွားချိန် နဲ့မကြာခဏ အစားအသောက်ပြတ်လပ်တဲ့အချိန်မှာ မိသားစုတွေ ဖရုံသီးပြုတ်ဘဲစားကြရတာတဲ့.. ကြားရတော့ တောင်ပေါ်ဒေသမှာနေသူတွေ သနားစရာတော်တော်ကောင်းတယ်..
စားလို့ တော့ ကောင်းသား.. ပြုတ်နေရင်းနဲ့ဖရုံသီးကို ဆားနည်းနည်းဖြူးလိုက် ဝါးတံသေးသေးလေးနဲ့ ထိုးလိုက်ဆိုတော့ ဖရုံသီးထဲ ဆားအနည်းငယ် ဝင်ပြီးသား ဖြစ်သွားရော..
Post နှင့်တော့ မဆိုင်ပါဘူး
ရိုးရာ အစားအစာ ဆိုလို့ ။
Trader Hotel ဘူဖေးဆိုင်က ဒီအပတ်ကနေ စပြီး
တရက်ကို တိုင်းရင်းသား တမျိုး ဘူဖေး လုပ်မယ်တဲ့။
23 $ ဆိုလားပဲ ( ဈေး သိပ်မသေချာပါ ၊ မေ့သွားလို့ ) ။
တိုင်းရင်းသား အစားအစာ တွေက
စားနေကျ စတိုင် မဟုတ်တော့ အဆန်းအပြားဖြစ်တာ မှန်ပေမယ့်
သိပ်အရသာ မတွေ့လှဘူးလို့ ( အဘ personally ပါ ) ထင်မိပါတယ် ။
ပြည်တွင်း customer တော့ ထိုးကျသွားမယ်ထင်တယ် ။
တိုင်းရင်းသား ရိုးရာ အစားအစာ မြည်းကြည့်ချင်သူ တွေ အတွက်ကတော့
စူးစမ်းစရာ နေရာတစ်ခု ထပ်တိုးတာပေါ့ ။
အဘလည်း မြန်မာပြည်နေရာ တော်တော် များများရောက်ဖူးလို့
တိုင်းရင်းသား အစားအစာ တော်တော် များများ မြည်းကြည့်ဖူးပါတယ် ။
ကြိုက်တာလည်းရှိ မကြိုက်တာလည်းရှိ ပေါ့ ။
ဒါပေမယ့် ဒီလောက် ဈေးကြီးပေးပြီးမှ စားရမယ်ဆိုရင်တော့ ?????
အခုဟင်းတွေထဲ.. ငရုပ်သီးအရိပ်အယောင်မမြင်ရတာလေး… အံ့သြမိသား…။
ကျနော်ကတော့ ၀က်သားပြုတ်မြင်တော့ အားပေးချင်စိတ်ပေါ်က်သွားတယ်။
ဂီ ဂီ….မြည်အောင် ဆာသွားတယ် ။
လျှာမှာလဲ သွားရေတွေ ရွှဲသွားတယ် ။
ကုလားအော် တစ်တောင့်လောက် ကိုက်ပြီး ဆွဲလိုက်ရရင် …..။
စကားမစပ် နည်းနည်း ကြွားလိုက်ဦးမယ် ။
ကျွန်တော် အခု တီးတိန်သူ ချင်းမလေး တစ်ယောက်နဲ့ဟဲ..ဟဲ…ဟဲ..ဟဲ…။
အဲဒါမျိုးတွေ သိပ်မကြာခင် ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ ။
မစားဖူးတဲ့ အစားအစာတွေ ကို မြင်သိခွင့်ရတာ
ရောင်ခြည်ခ က ကလေးမြို့ က ဆိုရင် သတင်းတစ်ပုဒ်လောက် ကို ဓါတ်ပုံများနဲ့ တင်ဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လ နှစ်လ လောက်က ၊ ကလေးမှာ စာပေဟောပြောပွဲ သွားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ တွေ ပြန်လာတော့ ၊ ကလေးမြို့ က လဘက်ရည်ဆိုင်တွေ မှာ ၊ နေ့ ခင်းကြောင်တောင် ကို ဆင်းရဲသား ကားတွေ ပြနေကြတယ် တဲ့ ။ လာထိုင်တဲ့ လူတွေ က လဲ ၊ ဆင်းရဲသားကား ပြတဲ့ ဆိုင်မှ ထိုင်တာမို့ ၊ မဖြစ်မနေ ပြရပါသတဲ့ ။
အဲ့သတင်းကြားရတော့ ၊ ချင်းမတွေ ကိုယ်ကျိုးတော့ နည်းကုန်တော့မှာဘဲ လို့ တွေးပူမိတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ကျုပ် တို့ မြို့ ကို နှစ်စဉ် ဈေးလာဝယ်ကြတဲ့ ချင်းမ တွေ ကို မြင်ရရင်တော့ အဲ့အတွေး ပျောက်သွားပြန်တယ် ။ ဖိုက်တာတွေ ချည်းဘဲ ၊ ညနေစောင်းရင် ၊ နီးရာ စားသောက်ဆိုင်မှာ တစ်ပွေထဲလဲ ဝင်ပြီး အဝေရာ ဟောတု လုပ်တာချည်းဘဲ ။
အင်း… နီလဲ မတတ်နိုင်ဘူး ဗျာ ။
အဘဖောပြောသလို တိုင်းရင်းသား အစားအစာ တွေက
သိပ်အရသာ မတွေ့လှဘူးလို့ ( အဘ personally ပါ ) ထင်မိပါတယ် ။ ဆိုတာ မှန်ပါတယ်အဘ၊ ကျမလည်း ရောက်စကတော့ မစားတတ်ပါဘူး………….
သူကြီးရေ…….. ငြုပ်သီးက မထည့်လိုက်မိတာ၊ ငြုပ်သီး အစိမ်းကို အတောင့်လိုက်ကိုက်စားကြတာလေ ……………………
ဦးပေါက်ရေ ………. ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုလာရင် ကလေးမြို့ကို ၀င်ခဲ့လေ၊ ဦးပေါက်လာမယ်ဆို ကျမဆီ PM ပို့ပေးလေ ……….
တပ်မကြီး ၇၇ က တီတိန်သူလေးနဲ့ဆိုတော့ နောက်ကျ ရိုးရာအစားအစာတွေ တစ်ဝစားရတော့မှာပေါ့……..
ဦးတော်ကာရေ……. အဲ့ဒီအကြောင်း ကျမလည်းကြားတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဆိုင်တွေဆိုတာတော့ သေချာမသိဘူး၊ ကျမတို့ သွားထိုင်ဖြစ်တဲ့ဆိုင်က လေဆိပ်ရှေ့ကဆိုင်နဲ့ ပန်းလှိုင်မွှေးမှာ ပဲထိုင်တာဆိုတော့ အဲ့ဒီဆိုင်တွေက အဲ့လိုတွေတော့ မပြဘူး၊ သတင်းယူဖို့တော့ ကျမက မိန်းကလေးဖြစ်နေတော့ အဆင်မပြေလောက်ဘူးထင်တယ်………………
ကိုငြိမ်းချမ်းရေ…. အရင်ကတော့ ဖရုံသီးမကြိုက်ဘူး၊ ဒီရောက်တော့မှာ ဖရုံသီးပြုတ်ကို ဆားနဲ့တို့စားရတဲ့အရသာကို ကြိုက်သွားတာ………..